ShweMinThar: အလုပ်ရချင် CV ပြင် (အစ - အဆုံး)
အရင်ရေးခဲ့တဲ့ “လူငယ်နှင့် အလုပ်အကိုင် (သေချာပေါက်အလုပ်ရအောင်…ဒါအရင်ဖတ်..)” မှာတုန်းကအလုပ် လျှောက် တာနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး အဆင့်တစ်ဆင့်ချင်းစီ ကျွန်တော်ပြော ခဲ့ပါတယ်..။ အခုကတော့ အလုပ်လျှောက်တဲ့အခါ အရေး အကြီးဆုံး ဖြစ်တဲ့ CV (Curriculum Vitae) မြန်မာလိုတော့ ကိုယ်ရေးအ ချက်အလက်လို့ပဲ ဆိုကြပါစို့။
အရင်ဆုံး CV အကြောင်းမပြောခင် အလုပ်ရှင်ဘက် (သို့မဟုတ်) HR ဘက်က CV အပေါ်အမြင်ကိုပြောပြပါ့မယ်..။ အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် HR တော်တော်များများက လက်ထဲရောက်လာတဲ့ CV တွေကိုကြည့်ရင် အရင်ဆုံး ဘယ်အပိုင်းတွေကို အဓိကထားပြီး ကြည့်ပါသလဲ။
- CV ၏သွင်ပြင်ပုံစံ (Presentation Of CV)
- နာမည် (Name)
- ပညာအရည်အချင်း (Education)
- အသက် (Age)
- အခြားအရည်အချင်းများ (Other Qualification)
- လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (Working Experience)
စတာတွေဖြစ်ပါတယ်..။ ပြောရရင်တော့ ခေါ်ထားတဲ့ Position နဲ့ ကိုက်ညီရဲ့လားဆိုတာအကြမ်းဖျင်းကြည့်လိုက်တဲ့သဘောပါ..။ ဆိုလိုတာက HR တွေဟာ Position အများကြီးအတွက် CV တွေအများကြီးကို Screening လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျန်တဲ့အချက် အလက်တွေထက် အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အချက်တွေကိုအဓိက ထားပြီးကြည့်ကြပါတယ်..။ အဲ့ဒီအချက်တွေမှာကိုက်ညီတော့မှ အခြားအ ချက်အလက်တွေကို ကြည့်တာပါ..။ ခုပြောခဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေဟာ အလုပ်ခန့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာ အရေးကြီး တဲ့အချက်အ လက်တွေပါ..။
ကဲ..။ HR တို့၊ အလုပ်ရှင်တို့ဘက်က CV ကိုဘယ်လိုအချက်တွေအဓိ ကထားပြီးကြည့်လဲ သိပြီဆိုရင် ကိုယ့် CV ကိုဒီအချက်အလက် တွေကို အခြေခံပြီး ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာသိလောက်ပြီပေါ့..။ အသေးစိတ်ဆက်ရှင်းပြပါ့မယ်..။
CV တွေအများကြီးထဲမှာ အရင်ဆုံးဆွဲထုတ်ပြီး ဖတ်ကြည့်မိတဲ့ အဓိ ကအကြောင်းအရင်းဖြစ်ပါတယ်..။ သာမန် တွေ့ရိုးတွေ့နေကျ CV ပုံစံမျိုး မဟုတ်ဘဲ ကွဲပြားတဲ့ ပုံစံမျိုးတင်ပြထားတဲ့ CV တွေကို ပိုပြီးသတိ ထားမိ တတ်ပါတယ်..။ များသောအားဖြင့်က တွေ့နေရတဲ့ CV တွေကို အမျိုးအ စားခွဲခြားကြည့်ရအောင်ပါ..။
(၁) မိတ္တူဆိုင်မှာရောင်းတဲ့ CV ကို လက်ရေးနဲ့ဖြည့်ပြီး ဓာတ်ပုံကပ်ပြီး တင်တဲ့ CV
(၂) သာမန် CV ပုံစံကို ကွန်ပျူတာစာစီဆိုင်မှာ စာစီထားတဲ့ CV
(၃) ကိုယ့် CV ကို ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပုံစံ သေသေချာချာ ပုံစံချပြီး ကိုယ်တိုင်စာစီတာ/ ကွန်ပျူတာဆိုင်မှာ စာစီတာ မျိုးနဲ့ ပြင်ဆင် ထားတဲ့ CV.
(၄) စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်မှာ လက်ရေးနဲ့ပဲ သာမန် CV ပုံစံကိုချရေးဖြည့် ထားတဲ့ CV
....ဆိုပြီးအကြမ်းဖျင်းအမျိုးအစား (၄) မျိုးထွက်လာတာတွေ့ရပါတယ်..။
စာဖတ်သူအနေနဲ့ ကိုယ့် CV ဟာဘယ်အမျိုးအစားနဲ့ အနီးစပ်ဆုံး ဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်ပေါ့နော်..။ CV ထဲမှာပါတဲ့အရည်အချင်းတွေ၊ ပညာတွေကိုခဏထားပြီး အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို CV တွေအများကြီး ထဲက ဆွဲထုတ်ကြည့်ရတဲ့ CV ဆိုတာ ဘယ်အမျိုးအစားထဲပါမယ်လို့ ထင်ပါသလဲ..။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာကို ခုလောက်ဆိုသဘော ပေါက်လောက်ပါပြီနော်..။ အဲဒီတော့ ကိုယ့် CV ကို HR တို့ လုပ်ငန်းရှင်တို့ဘက်ကနေ စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရလောက်အောင် Presentation Skill ကောင်းနေဖို့လိုပါတယ်..။ တချို့သင်တန်း သားတွေက ပြောကြပါတယ်..။
ဆရာကျွန်တော်တို့က ခုမှ အလုပ်စလုပ် မှာအဲ့ဒါတွေမလုပ်တတ်ဘူး..တဲ့.။ မှန်ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် မွေးထဲကတော့ဘယ်သူမှမတတ်ပါဘူး..။ အလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီး လတ်လျားလတ်လျားလုပ်နေတဲ့သူတွေ တပုံကြီးပါ..။ ကိုယ်အလုပ်ရှာတဲ့ရည်၇ွယ်ချက်ဟာ အလုပ်ရမှ အောင်မြင်တယ် ဆိုရမှာပါ..။ အရင်က မသိဘူး..။ ခုကျွန်တော်ပြောပြလိုက်လို့သိသွားပြီ..။ တချို့ကတော့ မှန်သားပဲဆိုပြီးလိုက်လုပ်ကြမယ်..။ တချို့က အပိုတွေပါလို့ သတ်မှတ်လိမ့်မယ်..။ လုပ်တဲ့သူအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်..။ အဲ့ဒီတော့ CV ပေါ်ထားတဲ့ ၀န်ထမ်းရွေးချယ်မယ့်ဘက်က အမြင်နဲ့ ပဏာမရွေး ချယ်တဲ့ပုံစံကိုတော့ သိပြီပေါ့..။ ကိုယ့် CV ရဲ့သွင်ပြင်ကို ဘယ်လိုဆိုရင် Attention ပိုရှိလဲဆိုတာမြင်ပြီပေါ့..။
နာမည်နဲ့ ပါတ်သက်ပြီးတော့ ထွေထွေထူးထူးပြောစရာတော့မရှိပါဘူး..။ နာမည် တစ်မျိုးထက်ပိုတဲ့သူတွေရှိတတ်ပါတယ်..။ အဲ့ဒါဆိုရင် တော့ အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် ဥပမာအားဖြင့် .. Mg Phyu @ Mg Win Min ဆိုပြီး “ @ “ ခံရေးလို့ရပါတယ်..။ မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ မောင်ဖြူ (ခ) မောင်ဝင်းမင်း ဆိုပြီး “(ခ)” ခံရေးလို့ရပါတယ်..။ ဒါဆိုရင်ရွေးချယ် မယ့်ဘက်က ၀န်ထမ်းလောင်းဟာ နာမည်(၂) မျိုးရှိနေ တယ်ဆိုတာ သိပါပြီ..။ ဒီမှာပြောစရာရှိသေးတယ်ဗျ..။ နာမည်မှာ “ဦး” တပ်ရေးတာနဲ့ “ကို” တပ်ရေးတာနဲ့ “မောင်” တပ်ရေးတာ ဘယ်ဟာမှန်လဲဆိုပြီး ၀ိဝါဒကွဲနေသေးတယ်..။ တကယ်တော့ အသက်ပြည့်ပြီးအလုပ် လုပ်ကြ တာဖြစ်တဲ့အတွက် “ဦး” တပ်ရေးတာက တော့ အသင့်တော်ဆုံးပါ..။ အမျိုးသမီးဆိုရင်တော့ “ဒေါ်” ပေါ့ဗျာ..။ တစ်ခါတစ်လေ မန်နေဂျာ လျှောက်တဲ့သူတွေတောင် မောင်စိုးမြင့် တို့ဘာတို့ဆိုပြီး “မောင်” တပ်လာတဲ့ CV တွေတွေ့ရတတ်ပါတယ်..။ သတိထားစရာလေးပေါ့..။
ကိုယ့်ပညာအရည်အချင်းကို ဖြည့်တဲ့နေရာမှာ ….
- ၁၀ တန်းဆိုရင်လည်း အောင်ပြီးတာလား၊ မအောင်တာလား သေသေချာချာရေးပါ..။
- တက္ကသိုလ်တက်နေတာဆိုလည်း ၊ Major ၊ Year တွေသေသေချာချာရေးပါ..။
- ကျောင်းပြီးသွားရင်လည်း ရတဲ့ဘွဲ့ကိုသေသေချာချာရေးပါ..။
- တချို့က တက္ကသိုလ်တော့တက်ပါတယ်..သို့သော် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဆက်မတက်တော့ဘူးဆိုရင်လည်း ကျောင်းကိစ္စ
- တချို့က ၁၀ တန်းအောင်ပြီးပြီ ဒါပေမယ့် ကျောင်းဆက်မတက်တော့ဘူးဆိုရင်လည်း ဖော်ပြပေးပါ..။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အလုပ်တွေခေါ်တဲ့အခါ ပညာအရည်အချင်း သတ် မှတ်ချက်တွေပါပါတယ်..။ ဖြစ်နိုင်ရင် ခေါ်တဲ့ Position နဲ့ကိုယ် နဲ့ကိုက်ညီမှလျှောက်ပါ..။ နို့မို့ဆို ကိုယ်လည်းသိက္ခာကျပါတယ်..။ နောက်တစ်ခုက တော်တော်များများ ခုနောက်ပိုင်းအလုပ် တွေက ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းတဲ့သူတွကို အဓိကထားလာကြတယ်..။ ဘာလို့လဲဆိုရင်..ခွင့်ပြဿနာကြောင့်..။ ဒီ စာမေးပွဲဖြေဖို့ ခွင့်ယူတဲ့ကိစ္စက တော်တော်လည်းငြင်းရပြီး တော်တော်လည်းရှင်းရတဲ့ ပြဿနာ..။ အမှန်က အလုပ်ရှင်နဲ့ ၀န်ထမ်းနဲ့ညှိနှိုင်းရမှာ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နှစ်ဘက်လုံးမှန်နေလို့..။ ၀န်ထမ်းကလည်း သူ့တက်လမ်း ဘွဲ့ရဖို့…တစ်နှစ်မှ တစ်လလေးခွင့်ယူတာ..။ အလုပ် ရှင်ဘက်မှာလည်း ခုခေတ်က Position တစ်ခုအတွက်ဝန်ထမ်းကို အရံတို့..အပိုတို့..ခန့်ထားတယ်ဆိုတာ မူအရပဲရှိတာ..တကယ် က များသောအားဖြင့်မလုပ်ကြဘူး..။
အဲ့ဒီတော့ Position တိုင်းမှာဝန်ထမ်းက လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အတိုင်း အတိအကျ ထားထား တော့ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက် တစ်လလောက်လစ်လပ် သွားမယ့်ကိစ္စက တော်တော်ထိတယ်ပေါ့..။ သို့သော် မပေးလို့ကလည်း မဖြစ်။ ကြာတော့ လုပ်ငန်းဘက်က စဉ်းစားလာပြီ…ကျောင်းကိစ္စ ကင်းရှင်းတဲ့သူ ကိုပဲ ခန့်တော့မယ်ပေါ့..။ ၀န်ထမ်းတွေကတော့ ငါတို့ခွင့်ယူ တာအလကားယူ တာမဟုတ်ဘူး..လစာမဲ့ခွင့်ယူတာ..ဆိုပြီးပြောကြတယ်..။ လုပ်ငန်းဘက် ကကြည့်ရင် ၀န်ထမ်းကိုလစာမပေးရလို့ လုပ်ငန်းဘက်က သက်သာသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်..။ Company ရဲ့ Productivity ကျဆင်းတယ်..။ ခွင့်ယူသွားတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ နေရာမှာ ရှိနေတဲ့ ၀န်ထမ်းက တာဝန်ခွဲယူရတယ်..။ အခန့်မသင့်ရင် Over Load ဖြစ်တယ်..။ ကျန်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို မထိန်း နိုင်ရင် အလုပ်တွေဖိခိုင်းတယ် ဆိုပြီး ထွက်ကြပြန်တယ်..။ အဲ့လို့အကျိုးဆက်တွေရှိပါတယ်..။ ဒါက ကျွန်တော် နဲနဲပဲရှင်းပြတာပါ..။ အဲ့ဒါကြောင့် အလုပ်စလျှောက်ထဲက ကျောင်းကိစ္စကို ရိုးရိုးသားသားပဲဖြည့်သင့်ပါတယ်..။ ဒါမှ နောက်နောင် ကိုယ်ရော လုပ်ငန်း ဘက်ရောအလုပ်မရှုပ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ..။
တကယ်တော့ အသက်အရွယ်ကို ဖြည့်ရတဲ့အကြောင်းက အလုပ်လုပ်ဖို့အ သက်ပြည့်ကြောင်းကို ဖော်ပြတာကအကြောင်းအရာတစ်ခု။ နောက်တစ်ခု တော်တော်များများအလုပ်တွေမှာက အသက်ကန့်သတ်ချက်တွေရှိကြတယ်။ အဲ့ဒီတော့ကိုယ့် အသက်နဲ့ ခေါ်နေတဲ့ အလုပ်ကိုက်ညီတယ်ဆိုလျှောက်ပေါ့။ အဲ့ဒီအတွက်လည်း အသက်ကိုထည့်ပြီးကိုးကာကြပါတယ်..။ အသက်ကိုသီးသန့်မထည့်ပဲ မွေးနေ့သက္ကရာဇ်ဘေးမှာ ထည့်ဖော်ပြလို့ လည်းရပါတယ်..။
အခြားအရည်အချင်းများ (Other Qualification)
မိမိရထားတဲ့ အဓိကပညာအရည်အချင်းအပြင် အခြားတတ်ကျွမ်းမှုတွေကို ဖော်ပြရမှာပါ..။
- ကွန်ပျူတာအပါအ၀င် အခြားနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ
- လက်မှုအတတ်ပညာ၊ စက်မှုအတတ်ပညာ
- စာရင်းကိုင်၊ HR၊ Sales & Marketing စတဲ့ပညာတွေ
ဖော်ပြပါ ပညာရပ်ကျွမ်းကျင်မှုတွေအပြင် အများကြီးရှိပါလိမ့်ဦးမယ်..။
ဒါပေမယ့် ခွဲခြားဖော်ပြပေးရမှာကတော့ (၂) မျိုးထဲပါ။
(၁) Certificate Qualification (သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုခုက အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရထားတဲ့ အတတ်ပညာ/ အရည်အချင်းများ
(၂) Non-certificate Qualification (သင်တန်းကျောင်းတွေမှာ တက်ခဲ့တာမဟုတ်သော်လည်း အခြားလုပ်ငန်းမှာတုန်းက တတ်ခဲ့တဲ့ အတတ်ပညာ၊ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မပြနိုင်သော်လည်း တတ်ာကျွမ်းကြောင်း လက်တွေ့ပြသနိုင်တယ်ဆိုရင် ဖော်ပြပါခေါင်းစဉ်အောက်ကနေ ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးလို့ရပါတယ်..။ တဆက်တည်းမှာပဲ ဒီအတတ်ပညာကို ဘယ်လိုရခဲ့လဲဆို တာဖော်ပြပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်..။
အဲ့ဒီတော့ ဒီခေါင်းစဉ်(၂) ခုအောက်ကနေ သေသေချာချာခွဲခြားပြီး Other Qualification တွေကိုဖြည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်..။ တစ်ခုမှာချင်တာက..၀န်ထမ်းငယ်လေးတွေတော်တေ်ာများများဟာ..သင်တန်းတက်ထားတာမဟုတ်သော်လည်း အချို့ အတတ်ပညာ လေးတွေကို လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်အခြေခံပြီး တတ်နေကြတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်..။ ဒါပေမယ့်ဒီကလေး တွေဟာနောက်အလုပ်တစ်ခုကို ကူးပြောင်းတဲ့အခါ လျှောက်တဲ့ CV ထဲမှာ အဲ့ဒီပညာမျိုးမထည့်ကြပါဘူး..။ ဘာလို့လဲဆို တော့..သူတို့မှာ Certificate မရှိရင် မထည့်ရဘူးလို့ယူဆထားလို့ပါ..။ဒါဟာ တိတိကျကျမှားယွင်းပါတယ်..။ ကိုယ်ကလုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံအရတတ် ကျွမ်းနေတာမျိုးကို Non-certificate Qualification ထဲထည့်သွင်းဖော်ပြ လို့ရပါတယ်..။ ပြီးတော့ Other Qualification ဟာအလုပ်ရဖို့ အရေးကြီး တဲ့အထဲမှာပါပါတယ်..။ ဖြည့်ထားတဲ့ Qualification တွေကို Interview မတိုင်ခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်..။ များသောအားဖြင့် Interview တွေမှာ အမေးခံရတဲ့မေးခွန်းတွေထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်း အများဆုံးပါ..။ အလုပ်မရတာ..Interview မအောင်တဲ့အကြောင်းအရင်းတွေထဲမှာလဲ တစ်ခုအပါအ၀င်ပါ..။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင်တန်းတက်တယ်..Certificate ရရုံလောက်ပဲ..။ ဒီနေရာမှာကိုယ့်ကိုကိုယ် မညာကြေးပါ..။ သင်တန်းကိုအဖြစ်တက်လာကြ တာဆိုတော့ CV ထဲမှာဖော်ပြထားလို့ လုပ်ငန်းဘက်က အဲ့ဒါနဲပါတ်သက်တာကိုမေးပြီဆိုရင် တိုင်ပတ်ပြီပဲ..။ အဲ့ဒီမှာ လုပ်ငန်း ဘက်က First Impression ကိုစပြီးနင်းတာကိုခံရပြီပေါ့..။ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Certificate / Non-certificate Qualification တွေကိုဖြည့်ပြီဆိုရင် Interview မတိုင်ခင်သေသေချာချာ ပြင်ဆင်သွားပါ..။ Interview နဲ့ပါတ်သက်တာတွေကို တော့ နောက်ရေးတဲ့ဆောင်းပါးမှာ အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်..။
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (Working Experience)
အလုပ်ခန့်မယ်/ မခန့်ဘူးဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်တဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်ပါတယ်..။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေဖြည့်ရာမှာ အောက်ပါ အချက်အလက်တွေကို အတတ်နိုင်ဆုံးလိုက်နာပါ..။
(၁) အတွေ့အကြုံတစ်ခုထက်ပိုရင် လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကို ဖော်ပြပြီးမှ သူ့မတိုင်ခင်ကအလုပ်ကိုဖော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ ဖြည့်တဲ့နေရာမှာ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းအမည်တင်မဟုတ်ပဲ ဘယ်လို လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ Company ဆိုတာကိုပါထည့်ဖြည့်သင့်ပါတယ်..။ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားနဲ့ကိုယ့်တာဝန်နဲ့ကိုကြည့်ပြီးမှ ကိုယ့်ကိုအကဲဖြတ် လို့ရမှာပါ..။
(၂) Position ၊ အလုပ်စ၀င်တဲ့နေ့၊ အလုပ်နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့နေ့၊ ဘာတာဝန်တွေဆောင်ရွက်ခဲ့ရသလဲ၊ စတာတွေကို တိတိ ကျကျ ဖော်ပြပေးရပါမယ်။
(၃) နောက်တစ်ခုက ကိုယ်လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ခုခု ဆောင်ရွက်နေရင်း ရရှိခဲ့တဲ့ ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရှိခဲ့ရင်ဖော်ပြပေး နိုင်ပါတယ်..။
(၄) ဖြစ်နိုင်ရင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုတိုင်းမှာ လုပ်ငန်းထောက်ခံချက်တစ်ခုစီပူးတွဲတင်ပြသင့်ပါတယ်.။
ခုပြောသွားတာတွေက လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး အလုပ်လျှောက်လွှာမှာ ဖြည့်စွက်သင့်တဲ့ အချက်အလက်တွေဖြစ် ပါတယ်.။ တချို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ အမြင်မှားနေတာလေးကို ပြင်ပေးချင်ပါတယ်..။
“ကျွန်တော်တို့မှာ အလုပ်တွေအများကြီး အတွေ့အကြုံရှိတာတောင် အလုပ်မရဘူး..Interview မအောင်ဘူး..ဒါဆိုသူတို့က ဘာကိုခန့်ချင်တာလဲ..လစာကိုကောင်း ကောင်းမပေးကြဘူး..ကျွန်တော့်မှာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အများကြီးရှိနေတာ..။”
ကျွန်တော်တို့အမြဲကြားရပါတယ်..။ CV တွေ ကိုပြန်ကြည့်ရင် မှန်ပါ တယ်.သူတို့မှာအလုပ်တွေအများကြီး လုပ်ဖူးခဲ့တယ်..။ ဒါပေမယ့် အလုပ်(၃) ခုပေါင်း လုပ်သက် (၁) နှစ်။ တချို့တွေဆို (၃) လ တစ်ခုနှုန်းနဲ့ မှန်မှန်လေး (၁) နှစ် အလုပ်လေးခုပြောင်းလာခဲ့တယ်..။ ပိုဆိုးတာက အလုပ်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု က သဘောတရား လုပ်ငန်းသဘာဝဘာမှမဆိုင်တာတွေ..။ အဓိကပြောချင်တာက လူငယ်တွေအလုပ်လုပ်ကြတဲ့အခါ အလုပ် တစ်ခုမှာ အနည်းဆုံး (၁) နှစ်တော့လုပ်ပါ..။ အလုပ်များများလုပ်နိုင် တာကောင်းပေ မယ့် မြန်မြန်ပြောင်းတာကတော့ ရေရှည် အတွက်လုံးဝမကောင်းနိုင်ပါဘူး..။ တကယ်စည်းကမ်းကြီးတဲ့ Company ကြီးတွေရဲ့ HR တွေဟာ လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံပေါ် စဉ်းစားကြတဲ့အခါ လုပ်ငန်းအများကြီးလုပ်ခဲ့သူတွေကို လုပ်သက်အကြာကြီးလုပ်ခဲ့သူတွေလောက် စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်..။ လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာစွဲစွဲမြဲမြဲ လုပ်တဲ့သူတွေဟာလုပ်ငန်းပိုင်း အာရုံစိုက်မှုပိုများတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်..။
တကယ်တော့ လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့အစမ်းခန့်ကာလဟာ (၃) လဖြစ်ပါတယ်..။ ဒါကြောင့် (၃) လ (၄) လလောက်လုပ်ပြီးထွက်လာ တဲ့သူတွေဆို ခန့်မယ့် လုပ်ငန်းဘက်က တော်တော်စဉ်းစားကြပါတယ်..။ ဒါလေးက သတိထားပြီး ဆင်ခြင်နိုင်အောင်ပါ..။
နောက်တစ်ခုကတော့ ၀န်ထမ်းတွေကို ရပိုင်ခွင့်ရှိတာလေးတစ် ခုပြောပြချင် တာပါ..။ အလုပ်တစ်ခုမှာ ကိုယ်ကစည်းကမ်း နဲ့လုပ်တယ်..ကြိုးစားမှုအ များကြီးမရှိရင်တောင် (များများကြိုးစားနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့..) တာဝန်ကျေအောင်အလုပ် သေသေချာချာလုပ်တယ်.. အပြစ်မရှိဘူး ဆိုရင်.. လုပ်သက်ကလည်း (၁) နှစ်အထက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်..အလုပ်ထွက်တဲ့အခါ ထောက်ခံချက်တောင်းနိုင်ပါတယ်..။ ကိုယ်ကလည်း အလုပ်ထွက်တဲ့အခါ စနစ်တကျထွက်စာတင်မယ်..လွှဲပြောင်းစရာရှိတာ တွေကိုလည်း သေသေချာချာလွှဲမယ် ..စသည်ဖြင့် Resignation Process ကိုလိုက်နာ တယ်ဆိုရင် တောင်းလို့ရပါတယ်..။ အဲ့ဒီထောက်ခံစာဟာ ၀န်ထမ်း တစ်ယောက် အတွက်တော့ Certificate တစ်စောင်ထက်တန်ဘိုးကြီးပါ တယ်. ..။ ဒီထောက်ခံစာ တွေကို သေသေချာချာပူးတွဲတင်ပြနိုင်ခြင်းဟာ ကိုယ်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေက ကိုယ့်အပေါ်ထားတဲ့ တန်ဘိုး ကိုဖော်ပြနိုင် ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်..။
အခုလောက်ဆိုရင် အလုပ်ရှိနေတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ၊ ကိုယ့်ရဲ့ Career ကိုတန်ဘိုးထားတည်ဆောက်နေသူတွေအတွက် CV ကိုဘယ်လို Attraction ဖြစ်အောင်ဖန်တီးရမလဲဆိုတာအခြေခံအားဖြင့် နားလည်လောက်ပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်..။
လူငယ်တွေ အလုပ်အကိုင်ကောင်းတွေရရှိပြီး ရရှိတဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေ လည်းမြဲနိုင်ကြပါစေ..။
Asean National Trainer
Certified TOT Trainer
Posted by Alex Aung at 4:35 AM